Victoria akapomerwa mhosva yekusateerera nasupervisor wake. SaHR manager ndakamudaidza kuoffice kwangu kuti azotora suspension letter yake. Akaitora ndokuenda ndokudzoka after 10 minutes zvikanzi Sir ndokumbirawo ruregerero, dambudziko rangu nderezemo, ndaane 3 months ndisina kumbosvirwa. Zemo ndorinondipa tuhasha tusina basa. Kana muchida isai chigunwe mubeche rangu munzwe kuti kwakavharika sei.
· Last modified June 19, 2014 0
· Last modified June 22, 2015 Next story Kukwesha ka Babie kepaFacebook on Valentines day
Previous story Kusvirwa neCustomer Yangu Tisingazivane Mazita !